यी हुन् बलिउडमा न्युड फोटो खिचाउने कलाकार : RajdhaniDaily.com -
Home Not-to-be-missed यी हुन् बलिउडमा न्युड फोटो खिचाउने कलाकार
यी हुन् बलिउडमा न्युड फोटो खिचाउने कलाकार
मुम्बई । बलिउड कलाकार मिलिन्द सोमनले हालै न्युड फोटो सुट गरे । उनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा उक्त तस्विर खिचाएका थिए । समुन्द्रको किनारमा नाङ्गै दौडिएर उनले पोज दिएका थिए । उनले सोही तस्विर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै लेखे ‘ह्याप्पी बर्थ डे टु मी’ सोही तस्विरका कारण उनी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बने । तर, बलिउडमा न्युड तस्विर खिचाउने उनी पहिलो होइनन् । अरु पनि छन् ।
शर्लिन चोपडा : सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय शर्लिन चोपडाको इन्स्टाग्राममा अहिले पनि थुप्रै बोल्ड तस्बिर भेटिन्छ । उनी प्लेब्वाई म्यागजिनमा न्युड तस्विर छपाउने पहिलो भारतीय कलाकार हुन् । उनले चलचित्र कामसुत्र थ्री डीका लागि न्युड फोटो सुट गराएकी थिइन् । ति तस्विर सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेकी थिइन् ।
लिजा हेडेन : अभिनयको प्रभाव छाडन नसकेको आरोपको सामना गरेकी लिजा हेडेनले एक फिल्मको प्रमोशनका लागि न्युड फोटो सुट गराएकी थिइन् ।
इशा गुप्ता : एक क्याम्यिनका लागि न्युड फोटो सुट गराएकी इशा गुप्ताले पनि इन्स्टाग्राममा बोल्ड तस्विर सार्वजनिक गर्छिन् । उनी पनि न्युड तस्विर खिचाएपछि विवादमा आएकी थिइन् ।
सन्नी लियोनी : पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीले बलिउड प्रवेश गरेपछि पेटाको सोशल क्याम्पियनका लागि न्युड फोटो शुट गराएकी थिइन् ।
आमिर खान : मिष्टर पर्फेक्टनिष्ट भनिने आमिर खानले चलचित्र पिकेको पोष्टरका लागि न्युड फोटो सुट गराएका थिए । रेलको लिगमा उभिएर उनले न्युड पोज दिएका थिए । उनले रोडियोले आफ्ना संवेदनशील अंग छोपेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्नू : सर्वाेच्च
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोक्न सर्वोच्च अदालतले उचित कदम चाल्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)...
Breaking News Sushila Bishwokarma - July 4, 2020 0
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकका केही औषधि पसलले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै वढी मूल्य लिई औषधि विक्री गरेको भेटिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र बाह्रबिसे नगरपालिका स्वास्थ्य...
Breaking News Dhruba Lamsal - April 25, 2020 0
काठमाडाैं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडानलाई आगामी जेठ २ गते (मे १५) सम्म स्थगित...
बिचार गोपीनाथ मैनाली - April 15, 2021 0
पाहाँचः-हे र घोडेजात्रा
बिचार Kumar Raut - March 23, 2020 0
नेवारका विभिन्न चाडपर्वमध्ये रमाइलो र ठूलो चाड हो पाहाँचः-हे । नेवार जातिको विशेष संस्कृति भएको पाहाँचः-हे चाडले पाहुनालाई ठूलो स्थान दिइन्छ । पाहुनालाई...
प्रदेश ६ Sushila Bishwokarma - February 8, 2021 0
महोत्तरी । महोत्तरीसहितका मध्यपूर्वी तराईमा यसपालि मङ्सिर निगल्दो नै चिसोको कहर बढेको छ । विगत वर्षहरूमा पुस लागेपछि बढ्ने गरेको चिसो हावा यसपालि भने...
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल एपोलो अस्पताल भर्ना
प्रदेश Dhruba Lamsal - February 12, 2021 0
काठमाडौं । नेकपा दाहाल नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । खनालमा उच्च रक्तचाप र...